Wiil soomaali ah oo ku dhintay weerarkii lugu qaaday iskuul ku yaalay dalka Noorweey - iftineducation.com
Wiil soomaali ah oo ku dhintay weerarkii lugu qaaday iskuul ku yaalay dalka Noorweey
iftineducation.com – Weerarkii lugu qaaday iskuul ku yaala magaaladda Kristiansand ee koonfurta dalka Noorweey ayaa ku dhintay labbo ruux lugu dilay. Labadan ruux oo midood macalimad aheyd halka kan kalena uu ahaa arday ayaa u dhintay dhaawicii ka soo gaaray weerarkii mindi ee lugu dhiftay.
Allaah u naxariistee waxaa weerarkaasi ku dhintay wiil soomaaliyeed oo afar iyo toban jir ah oo la yiraahdo Yacquub Cabdullaahi.
Dhacdadan oo dhacday maalintii shalay aheyd ayaa ilaa iyo imanka waxaa ay booliska ku raad joogaan gacan ku dhiiglihii falkaasi geestay. Weerarkaan oo dhacday maalintii shalay aheyd ayaa ilaa iminka aan loo soo qaban gacan ku dhiig lihii geeystay. Booliska gobolkaas ayaa haatan ka codsanaya bulshada ineey gacan ka geeystaan siddii ay u soo qaban lahaayeen ama ay loo gudbin lahaa xog ku saabsan.
Falkan ayaa imanaya maalmo ka hor markii magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhin uu habeenimadii sabtida soo galeeysay kooxo hubeeysani ku dileen labbo wiil oo soomaali ah kuwaas oo fadhiyey maqaaxi laga cabo kafeega.
Liiska Xildhibaanada Lagu Soo Doortay Baydhaba
Nin Tanzaniya u dhashay oo xayeysiiyay inuu raadinayo xaas la baad